Dagaal culus oo dhex-maray Ciidamada dowladda & Al-Shabaab – XAMAR POST
Faah faahgino dheeraad ah ayaa kazoo baxaya dagaalk duleedka degmada Afgooye ee Gobolka Shabeellaha Hoose xalay ku dhexmaray Ciidamo ka tirsan kuwa Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Xubno ka tirsan Ururka Al-Shabaab.
Dagaalka ayaa yimid kadib markii Kolonyo ay la socdeen Ciidamo ka tirsan kuwa Dowladda oo ka baxay Afgooye kuna wajahnaa deegaanka Sabiib ay Al-Shabaab wadada u galeen,waxaana dagaalka uu sirasmi ah uga dhacay deegaanka Cumar-dheere ee duleedka degmada Afgooye.
Goobjoogayaal ayaa waxaa ay sheegeen in dagaalka uu socday in ka badan saacad,isla markaana uu jiro khasaaro labada dhinac soo gaaray,hayeeshee aan la cadeyn Karin maadaama habeen ay aheyd xilliga dagaalka uu dhacay.
Mas’uuliyiin ka tirsan Maamulka degmadea Afgooye oo aan la xiriirnay si warar dheeraad ah aan uga helno ayaanan noo suurtagelin, iyada oo sidoo kale weli dagaalkaas Al-Shabaab dhankooda aysan ka hadlin.
Xaalada deegaanoo lagu dagaalamay ayaa saakay ah mid degan,waxaana la sheegay in Ciidamada Dowladda ay socdaalkoodii sii wateen,isla markaana ay gaareen deegaanka sabiib ee duleedka Afgooye oo dhowr bilood ka hor ay Ciidamadu la wareegeen.